June 2018 – AsiaApps
Xperia Football 2018 Theme အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Sony
June 29, 2018 June 29, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Xperia Football 2018 Theme အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Sony
Sony ဟာ Xperia device တွေအတွက် Theme အသစ်တွေကို အခုမှစပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်တုန်းကလည်း God of War နဲ့ The Sims Theme တွေကို Xperia…
Galaxy Note9အတွက် Color option အသစ်တစ်ခုကို Samsung မှကြေညာ
June 29, 2018 June 29, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Galaxy Note9အတွက် Color option အသစ်တစ်ခုကို Samsung မှကြေညာ
ခဏခဏ delay ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ Samsung Galaxy Note9ကိုလာမယ့် သြဂုတ်လမှာတရားဝင် မိတ်ဆက် တော့မယ်လို့ Samsung က အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ feature အပြည့်အစုံကို သြဂုတ်လ ၉…
Keyword Snooze button ကိုထည့်သွင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook
June 28, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Keyword Snooze button ကိုထည့်သွင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook
Facebook ဟာတော့ User တွေ Spoiler ရန်ကနေရှောင်ရှားနိုင်အောင် Keyword Snooze button ကို News Feed မှာ Feature အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Feature ဟာ See First,…
သင့်ဖုန်းထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ Application (၅) မျိုး
June 28, 2018 June 28, 2018 MoonFeaturesNo Comment on သင့်ဖုန်းထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ Application (၅) မျိုး
Application တွေနဲ့ Smartphone နဲ့ဆိုတာခွဲထားလို့မရတဲ့အရာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သင် install လုပ်ထားတဲ့ app က သင့်ရဲ့ Smartphone ကိုထိခိုက်စေနိုင်မယ်ဆိုရင်ရော သူ့ကို ဆက်ပြီးသုံးနေဦးမှာလား ??? ဆက်ပြီးအသုံးမပြုသင့်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်။ ကိုယ့်အတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်နေတဲ့…
Samsung Galaxy Note9ရဲ့ S Pen မှာ ဘာ feature တွေပါလာမှာလဲ ???
June 27, 2018 June 27, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Samsung Galaxy Note9ရဲ့ S Pen မှာ ဘာ feature တွေပါလာမှာလဲ ???
အရင်က ထွက်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Samsung Galaxy Note အမျိုးအစားတွေကနေ ခွဲပြီးထွက်ရှိလာမယ့် Galaxy Note9ရဲ့ S Pen ဟာ စောင့်ရကြိုးနပ်လာ လိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ သာမန် Pen တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အချက် တွေနဲ့…
Always-on Display အတွက် Clock style အမျိုး ၃၀ ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung
June 27, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Always-on Display အတွက် Clock style အမျိုး ၃၀ ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung
Samsung ဟာတော့ “ClockFace” ဆိုတဲ့ app ကိုဖန်တီးပြီး Clock style အမျိုးပေါင်း ၃၀ ကို Always-on Display (AOD) အတွက်ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ AOD Feature ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆…
OxygenOS 5.1.8 update လုပ်ပြီး ဘက်ထရီစားနှုန်းပိုမြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ OnePlus 6
June 26, 2018 June 26, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on OxygenOS 5.1.8 update လုပ်ပြီး ဘက်ထရီစားနှုန်းပိုမြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ OnePlus 6
One Plus6ရဲ့ နောက်ဆုံး update ဖြစ်တဲ့ OxygenOS မှာ ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီကို မြန်မြန်ပိုကုန်စေတဲ့ bug တစ်ခုပါဝင်နေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် သင့်ရဲ့ OnePlus6မှာ…
Earphone လေးတွေကို ကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ ?
June 25, 2018 June 26, 2018 MikeyFeaturesNo Comment on Earphone လေးတွေကို ကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ ?
Earphone ဆိုတာကတော့ smartphone သုံးသူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ တစ်ချို့ကလည်း လမ်းသွားရင်းဖုန်းပြောဖို့၊ တစ်ချို့ကလည်း သီချင်းနားထောင်ဖို့၊ တစ်ချို့ကလည်း ဂိမ်းဆော့ဖို့ စသည်ဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ Earphone တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း ဖုန်းဝယ်ကတည်းကပါပြီးသား original earphone ပဲကြိုက်တဲ့သူရှိသလို၊…
‘Your Time on Facebook’ ဆိုတဲ့ feature ကို ပြုလုပ်နေတဲ့ Facebook
June 25, 2018 June 25, 2018 MoonApp NewsNo Comment on ‘Your Time on Facebook’ ဆိုတဲ့ feature ကို ပြုလုပ်နေတဲ့ Facebook
Asiaapps က သူငယ်ချင်းတို့ရေ Facebook မှာ တစ်နေ့ကို အချိန်ဘယ်လောက်ထိ ဖြုန်းနေမိလဲဆိုတာကို သိချင်ကြလား ??? တစ်ခါတစ်ရံ Facebook သုံးရင်း အချိန်ဘယ်လောက်ထိ ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းမသိတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေလည်း ခဏ ခဏ ကြုံဖူးကြမှာပါ။…